Juun 2012 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Juun 2012
Dhismaha madaarka Ankara
Siyaasad-dejiyeyaasha dhaqaalaha iyo xirfadleyaashu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhibaatada 'hoos u dhaca miisaaniyadda mustaqbalka'. Hada way fududahay in la sharaxo dhibaatooyinka ka dhalan kara heerka deynta dadwaynaha ee sareysa. Haddii aan sharraxaad dheer laga bixin, gaabinno gaagaaban, [More ...]
Erdogan oo ka socda Xarunta Erzurum, Xarunta Logistic Center
Raiisel wasaare Recep Tayyip Erdoğan ayaa khudbadiisa ka sheegay xafladdii furitaanka maalgashiga 57, “Waxaan dhisaynaa xarun loojistikada ah oo loogu talagalay 280 kun oo 28 kun oo mitir murabac ah oo kuyaal 742 kun oo mitir oo laba jibaaran. Waxaan dhammeynay dhismaha xarunta saadka. [More ...]
Guddoomiyaha gobolka Trabzon Recep Kizilcuk ayaa shir guddoomiyay kulanka, xarunta saadka. Maamulka Trabzon, Wakaaladda Horumarinta Badda Madowga Bariga, degmada Trabzon, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Trabzon (TTSO), Wargayska Dunya iyo Bariga Madow ee Bariga [More ...]
TCDD waxay adeegsatay adeegga Metropolitan
Türeli CHP, İzmir-Ödemiş khadka ayaa u soo jiidanaya yaraanta tareennada: CHP Izmir Ku-xigeenka, xubin guddiga qorsheynta iyo miisaaniyadda ee baarlamaanka Rahmi Aşkın Türeli, Ödemiş-İzmir si loogu soo jeediyo dhibaatooyinka ka dhex dhaca tareennada u adeegaya. [More ...]
TCDD Erzurum Gaar Dheeraad Ah
Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkey Erzurum Station Manager Ahmet laga cabsado, dhismaha xafiiska 5 ee xarunta Saadka ee Erzurum ayaa sheegay in uu qandaraas ah lahaa oo ku taagnaan doonaa July. Basar wuxuu ku yidhi wariyaha AA, isagoo ku dhammeeya 2014 [More ...]
Heshiiska CR2 (Dhismaha Wadooyinka Tareenka)
Mashruuca Marmaray, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Hagaajinta Wadooyinka Reer-guuraaga ah: Soo iibinta Gawaarida Tareenka (Qandaraaska CR 2) Qandaraaska waxaa loo gudbiyey Kireystaha Qaanuunka 07 Juun 2007 waxaana la helay faylalka horudhaca ah 30 Luulyo 2007. [More ...]
WASAARADDA WAKIILADA 2006 14 Jaangooyay Daraasad-1: Gaadiidka Tareenka (Weli Socda) Mashruucan: 3
1. Sharraxaadda Mashruuca: Naqshadeynta iyo Soosaarka Prototype ee Wejiga Cusub ee Miisaanka Wejiga Wagon. 2. Ujeeddada Mashruuca: Kordhinta awoodda waxqabadka xoogga ee deegaanka, yareynta buufiska lagu dabaqi karo dhismaha wadada iyo tamarta keydinta. [More ...]
Tiknoolajiyadda dariiqa ee loo maro heerarka Yurub CEN waxay kuu damaanad qaadeysaa inaad ku raaxeysatid nolol maalmeedka meel xoogaa dabayl ah. Olympos Cable Car 4350 [More ...]
Jaamacadda Karabuk, Ardayda Iskuulada Tiknoolajiyada ah ee dhamaystay laba shahaadadood.
Waxay ku taallaa kaliya ee Turkey Karabük Rail Systems Engineering Department of ardayda jaamacadda kuwaas oo dhamaystiran koorsooyinka injineernimada mashiinka, iyo sidoo kale qaato diblooma koorsooyin yar ee nidaamka injineernimada iyo xadiidka farsamo iyo sidoo kale arkaya dheeraad ah. Karabük [More ...]
Taraamku maaha mid ku habboon dhismaha BURC
Necati Şahin, Madaxweynaha laanta Bursa ee Rugta Injineerrada Rayidka (IMO), ayaa sheegtey in taraamka uu ahaa mashruuc khaldan oo wuxuu yiri, ulaşım nasiib darro, qorshaha gaadiidka ee laga soo saaray bannaanka ma ahan qorsho kale. Kama soo horjeedno taraamka, laakiin [More ...]
Ürgüp: Nidaamka iskuullada ee ku haboon ma ahan Sivas
Sivas, gaadiidka ugu adag ee udhaxeeya jaamacada iyo Sivas waxay u maleeyeen nidaamka tareenka Duqa magaalada Urgup inuu kasoo horjeedo. Systemr Nidaamka tareenka ma waafaqsanayn xaqiiqada Sivas. Jaamacadda [More ...]
Xoojinta dhulka ee tareenka xawaaraha sare leh
Tareen xawaare sare leh ayaa laga saaray laba sano. Shaqo iyo diyaarin dhibic kasta oo Tareenka Xawaaraha Sare ayaa socda. Joojinta Guryaha 42 ayaa sidoo kale socda shaqo horumarineed oo dhulka ah. Wax la taaban karo oo ku saabsan aaggan [More ...]
30 June 1855 Sultan Abdülmecid, khudbadiisa oo uu kula hadlay Vükelaya, wuxuu codsaday in ganacsiga tareenka la bilaabo sida ugu dhaqsaha badan. 30 June Dhismaha Khadka Kemerburgaz-Çiftalan ayaa la bilaabay. 1916 Juun 30 Railways iyo Xafiiska Dhismaha Dekedaha [More ...]